UMengameli u-Ouattara ubhekene nezinkinga eziningi ezweni lakhe - Bayede News
Home » UMengameli u-Ouattara ubhekene nezinkinga eziningi ezweni lakhe
Amanzi isikhali esiyingozi emnothweni
Ngaphambi kokhetho lobumengameli lwangenyanga edlule idolobha iM’Batto belibukwa njengelincane elisenkabeni ye-Ivory Coast elinokuthula, lapho abezinhlanga ezahlukene bebekwazzi ukushadana, nabenkolo yamaKhrestu namaSulumane bekhona kungekho kushayisana noma ukuphikisana. Lokhu kushiwo izakhamuzi zakuleli lizwe.
Emasontweni amabili ngemuva kwalolu khetho imigwaqo igcwale izinhlamvu zezibhamu, izitolo zashiswa kwaphinde kwabikwa nokuthi sekushone abantu abayisithupha, bebulawa ezimpini zobuhlanga. Ezinye zezakhamuzi zesaba ukuthi lokhu kuhlaselana kungagcina sekuba yimpinda yempi yezakhamuzi zaleli lizwe yangowezi-2002 nowezi-2010/11.
Ngomhla zingama-31 kuMfumfu kwaba nokhetho kuleli lizwe olwadutshwa ngamaqembu aphikisayo okwagcina sekuvula isilonda sakudala salo mayelana nombuzo wobunikazi baleli lizwe phakathi kwabokufika abasenyakatho bohlanga lwamaDioula kanye nabohlanga lwama-Agni eningizimu olukholwa ukuthi yibona abahlali bokuqala bakuleli lizwe.
Iiqiniso lithi ukunqoba kukaMengameli u-Alassane Ouattara ihlandla lesithathu elinempikiswano kwenze isimo saba nzima kakhulu kuleli lizwe.
“Bengisekhaya ngesikhathi umuntu engishayela ucingo engitshela ukuthi nazi izingane zishisa isonto lethu (lamaSulumane). Siye sesigijima sithi siyolivikela,” kusho u-Amidou Togo emizuzwini elandele lokho kube khona osedubula eqondise kuyena uTogo okumshiye nesilonda emqaleni.
Lolu dlame lufake uMengameli u-Ouattara enkingeni enkulu emuva kokhetho lapho sekufanele azibuze ukuthi uqina kanjani amelane nezimbangi zakhe ezithi ihlandla lakhe lesithathu lephula umthetho, ngapha ezama ukuhlanganisa kabusha leli lizwe eselehlukene phakathi.
Le ngqinamba ebhekene noMengameli icace bha edolobheni iM’Batto ngesonto eledlule lapho abaphathi bezitolo bezame ukuhlanza izindawo zawo ezingekho esimweni esihle ngemuva kwemibhikisho nezimpi zobuhlanga kuthi eceleni kube khona amasosha ahlomile ahamba eduze kwabo.
Lolu thuthuva kulelid olobha luqale ngesonto eledlule ngesikhathi abaseki bomholi weqembu eliphikisayo abangabohlanga lwama-Agni, uPascal Affi N’Guessan, babhikisha bekhombisa ukuphikisana nokhetho. Kuthe kusenjalo abohlanga lwamaDioula, abeseka uMengameli u-Ouattara, bavimba ababhikishi abangena esifundeni sabo kwabe sekusuka esinamathambo.
Angeke apheze ukuhlambalaza uTrump
Omunye wesifazane ogama lakhe nguMariette Koua kubikwa ukuthi ushonelwe yingane waphinde washiselwa isitolo ngesikhathi kunale mpi phakathi kwalezi zinhlanga.
Umngane wakhe uSidonie Nguessan Marie ubehleli eceleni echaza into ayibonile ngenxa yokuthi uKoua ubesashaqeke kungasakhulumeki ngalento emehlele.
“Bashise ibhizinisi lami engidayisa kulo ukudla. Bashise yonke into. Asisenalutho njengamanje, asazi nokuthi sizokwenzani, yonke into ishabalele, ishisiwe,” kuphetha uMarie.
Anathi Mtaka Nov 27, 2020